MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: သမ္မတ အမိန့် လိုက်နာဖို့ စစ်တပ်က ပျက်ကွက်တာလား ???? စစ်တပ်က သမ္မတကို ချောက်ချနေတာလား ?????
သမ္မတ အမိန့် လိုက်နာဖို့ စစ်တပ်က ပျက်ကွက်တာလား ???? စစ်တပ်က သမ္မတကို ချောက်ချနေတာလား ?????
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး, အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်းမှ
သောကြာနေ့က လဂျားယန်ဒေသ စစ်ဆင်ရေးကို ရပ်ပြီလို့ သမ္မတရုံးက ကြေညာချက် ထွက်ပါတယ်။ စနေနေ့မှာတော့ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေရှေ့ ကေအိုင်အေကို အပစ်ရပ်ရအောင်၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ရအောင်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ထပ်တွေ့ရာမှာလည်း ကေအိုင်အေရဲ့ လိုင်ဇာဌာနချုပ်ဟာ တပ်မတော်ရဲ့ လက်တကမ်းမှာ ရှိပေမယ့် အဆုံးသတ် သိမ်းပိုက်မှု မလုပ်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တာက တပ်မတော်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပါပဲလို့ ဦးသိန်းစိန် ထပ်ပြော ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ယခု စနေရော၊ တနင်္ဂနွေမှာပါ လဂျားယန်ဒေသမှာ အမြှောက်ကြီး ပစ်ခတ်သံတွေ တဂျိန်းဂျိန်းပဲလို့ ဒေသအတွင်း စောင့်ကြည့်သူများက ပြောပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံတွေ ပျံပေမဲ့ ဗုံးမကြဲကြောင်း သိရပါတယ်။
သမ္မတ အမိန့်စစ်တပ်က မလိုက်နာဘူးလို့ ဝေဖန်တော့ စစ်တပ်က ခုခံစစ် ပြန်ချေပတယ်။ လေတပ်ရော၊ ကြည်းတပ်တွေနဲ့ အကြီးအကျယ် စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေတာကို ခုခံတာလို့ ဆိုတော့ စောင့်ကြည့်သူများက ယုံရခက် နေကြပါတယ်။
တချို့ကတော့ သမ္မတဟာ စစ်တပ်ကို အမိန့်ပေးမရဘူး၊ ပျော့ညံ့သူ တယောက်လို့ ပုံပေါ်အောင် တမင် ချောက်ချနေတာ လို့လည်း ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ တကယ်လည်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာပါ တပ်က ဩဇာအာဏာ ကြီးမားစွာ ထိန်းချုပ်ထားဆဲပါ။
at 1/21/2013 11:08:00 AM
Anonymous January 21, 2013 at 5:55 PM